Inkqubo - iNantong Global Packaging Products Co., Ltd.
Ukusuka ekuthatheni inxaxheba kuphando kunye nokuqonda umthengi ekwenzeni ukungunda kunye nokwenza imveliso ngobuninzi, sithatha unonophelo olukhulu ekupakisheni kwakho.
Ukupakisha kungaphezulu kokukhusela imveliso; lijelo lophawu lwakho lokunxibelelana nabathengi balo kwaye lisebenza njengesixhobo sokuthengisa esidibeneyo.Siya kufundisiso olunzulu ngemveliso ngokudibeneyo nomthengi.
Umzobo unikezelwa kwiqela lethu loyilo elingaphakathi endlwini elinamava edibeneyo eshishini ngaphezulu kweminyaka elishumi kwaye aqhelene nokukhethwa koyilo lwedemokhrasi kumazwe amaninzi. Ekugqibeleni, isampuli yokubumba iyenziwa.
Iisampulu zomngundo ukwamkelwa koyilo lwendalo, ukupakishwa kuyavavanywa ngakumbi kukomelela kwayo, ubuhle bayo, ukusebenza kwayo kunye nokusebenziseka kokugqibela.Ngokugqibela, ukupakishwa kuya kwimveliso kwicandelo lethu lemveliso yaseburhulumenteni, ebambelela kuvavanyo lomgangatho ongqongqo. Sikwabonelela ngokuhanjiswa ngobuninzi kwemveliso emva kokuveliswa.